रही एक मोबाइल फोन मा जापान - सबै वकिल जापान मा अनलाइन. सबै भन्दा ठूलो कानूनी पोर्टल को वकिल.
रही एक मोबाइल फोन मा जापान
पछि बाहिर दिइरहेको कल लागि प्रश्न हाम्रो सामाजिक मिडिया, यो स्पष्ट भयो कि यो आउँदा क्रमबद्ध बाहिर एक मोबाइल फोन यहाँ, हामी धेरै साँच्चै थाहा छैन कहाँ सोधिने प्रश्न गर्न थाल्छन् । त्यसैले, ज्ञान चालक मा मोबाइल नेभिगेट मदत गर्न भ्रामक परिदृश्य को जापानी दूरसञ्चारको अन्त गरेर यो मेगा सोधिने प्रश्न, हामी छौँ आशा सुसज्जित तपाईं संग पर्याप्त जानकारी पाउन सम्झौता छ कि तपाईं को लागि सही छ । जापान नौसिखिया अझै भारी विकल्प ओभरसाइजगरिएको फोन मामला, वा एक दीर्घकालीन बासिन्दाहरूले बस देख स्विच गर्न, आफ्नो भरोसेमंद गर्न एक राम्रो योजना, यहाँ छन् जवाफ आफ्नो सबैभन्दा बारम्बार सोधिने प्रश्नहरू बारे रही एक मोबाइल फोन मा जापान । जबकि, यो छ, सबैभन्दा उन्नत संचार वातावरण मा, संसारको जापान, दुर्भाग्य, छ, धेरै सख्त नियमहरु र प्रस्ताव लगभग कुनै लचीलापन गर्न आवश्यकता गर्न खानपानको प्रबन्ध गर्नु, विदेशी मान्छे । मोबाइल छन् यहाँ परिवर्तन गर्न छ कि छ । को एक प्रदान गर्न पहिलो समाधान गर्न एक तरिका मदत विदेशी बासिन्दा जापान मा, हामी उद्देश्य गर्न योगदान गर्न एक राम्रो संचार लागि वातावरण विदेशीहरू मार्फत हाम्रो सेवाहरू सहित, दीर्घकालीन फोन र इन्टरनेट योजना, साथै भाडा सिम कार्ड र खल्ती वाइफाइ लागि पर्यटक । ठूलो तीन डोकोमो, र. अब को रूपमा, डोकोमो छ सबै भन्दा ठूलो संख्या को प्रयोगकर्ता । आउ र हो, दोस्रो र तेस्रो स्थान क्रमशः. एक दूरसञ्चार कम्पनी संग यसको आफ्नै संचार पूर्वाधार, यस्तो डोकोमो, र, भनिन्छ एक (मोबाइल नेटवर्क अपरेटर), जबकि जो एक कम्पनी किराए एक गरेको स्रोतहरू प्रदान गर्न नेटवर्क सेवा भनिन्छ एक (मोबाइल भर्चुअल नेटवर्क अपरेटर). अक्सर प्रस्ताव सस्ता योजना भन्दा मुख्य मोबाइल वाहक छ । डोकोमो नेटवर्क सधैं द्वारा समर्थित सबैभन्दा उपभोक्ताहरु को इतिहास मा मोबाइल फोन मा जापान । तर तपाईं अझै पनि गर्नुपर्छ सावधान हुन पनि भने, एक भन्छन् यो प्रयोग गर्दछ डोकोमो नेटवर्क, केही अत्यन्तै ढिलो जडान गति गर्न । यो किनभने छ तिनीहरूले राशि सीमा तिनीहरूले खर्च मा भाडा मा सेवाहरू देखि एक राख्न आदेश मा आफ्नै मूल्य तल । मा पारंपरिक टेलिफोन ठेके संग, मूलतः तपाईं छौं खरीद गर्न आवश्यक एक फोन र सिम कार्ड एकै समय छ । फोन बन्द गरिएको छ वाहक द्वारा, र धेरै अवस्थामा, प्रयोग गर्न सकिँदैन संग अर्को वाहक हो सिम कार्ड । बारेमा प्रतिशत, मोबाइल फोन प्रयोगकर्ता को मा जापान अन्तर्गत छन् यी पारंपरिक ठेके । अर्कोतर्फ, जसको वृद्धि सम्भव भएको थियो, एक कानूनी सुधार मा जापान मा, मूलतः मा ध्यान सिम कार्ड ठेके मात्र । केही तिनीहरूलाई बेचन के फोन पनि तर बस एक अतिरिक्त विकल्प । प्रस्ताव को दुई प्रकार सिम कार्ड: आवाज सिम कार्ड र डाटा सिम कार्ड. जापानी मानिसहरू अक्सर छनौट डाटा सिम कार्ड आफ्नो दोस्रो फोन, जबकि विदेशी बासिन्दा जो जापान रहन को लागि कम आधा भन्दा एक वर्ष एक प्रयोग रूपमा आफ्नो मुख्य फोन. यहाँ मोबाइल को अनुपात, आवाज गर्न डाटा ठेके छ अब लगभग दुई एक छ । दुवै आवाज सिम र डाटा सिम कार्ड योजना मार्फत भन्दा धेरै सस्ता छन् पारंपरिक ठेके । लागि विदेशी ग्राहकहरु, यो सम्म द्वारा एक राम्रो विकल्प, पैसा बचत साथै बिताएको समय सेट अप ठेके, र काटन माध्यम ले सबै को प्रशाशनिक तन्त्र छ । वास्तविक वास्तवमा, धेरै जापानी मान्छे फसाउन शुरू छन् गर्न मा कति सस्तो र सजिलो छ.
यो सेट अप गर्न छ, एक फोन संग एक पनि । यदि तपाईं हामीलाई सोध्न, यो सिर्फ कि अन्य सेवा प्रदायकको पनि महंगा छन्.
हामी भन्न छ कि आफ्नो उच्च मूल्य को एक परिणाम रूपमा आफ्नो रणनीति लागि ठूलो मुनाफा बिक्री गरेर नवीनतम फोन बजार मा र थप विभिन्न वैकल्पिक कार्यहरु जस्तै आवाज मेल, असीमित कल, कल प्रतीक्षा, र कल हस्तांतरण. साथै, तिनीहरूले लागि सोध्न एक दुई वर्ष ठेक्का संग एक दण्ड लागि शुल्क प्रारम्भिक समापन रोक्न आफ्नो ग्राहकहरु देखि स्विच गर्न अन्य प्रदायकहरू. यस छ अक्सर आउन अन्तर्गत ठूलो आलोचना दुवै जापानी र गैर-जापानी ग्राहकहरु । डाटा सिम कार्ड छैन एक फोन को संख्या संलग्न छ, त्यसैले यो असम्भव बनाउन वा कलहरू प्राप्त । तर सट्टा कल, अनुप्रयोगहरू यस्तो जस्तै, प्लान दूत, र लाइन सजिलो संचार को अर्थ, तिनीहरूलाई बनाउँछ जो एक अधिक किफायती विकल्प छैन गर्नेहरूका लागि बनाउन वा प्राप्त धेरै कल. अर्कोतर्फ, आवाज सिम कार्ड एक राम्रो विकल्प छ जो मानिसहरू लागि आवश्यक फोन नम्बर एक बैंक खाता खोल्न वा अचल सम्पत्ति ठेक्का, वा गर्न आवश्यक छन् जो एक फोन नम्बर मा आफ्नो कार्यस्थल, साथै डाटा ।, वा मोबाइल नम्बर पोर्टेबिलिटी, एक सिस्टम द्वारा साझा राख्न अनुमति दिन्छ कि तपाईंको हालको फोन नम्बर पनि गर्न स्विच गर्दा एक नयाँ अनुबंध संग एक नयाँ वाहक छ । मोबाइल प्रदान गर्न सक्छन् यो क्षमता माध्यम संग हाम्रो साझेदारी डोकोमो, संग अंग्रेजी भाषा बोल्ने समर्थन छ । थाहा छ कि आफ्नो फोन सिम फ्री छ वा छैन, यो छ आवश्यक सम्पर्क गर्न वाहक वा दोकान तपाईं यो खरिद देखि. सामान्य मा, सबै भन्दा फोनहरुका देखि अमेरिकी र युरोप छैनन् सिम निःशुल्क, तर सिम बन्द । अर्कोतर्फ, फोन देखि एशियाली देशहरुमा, अधिक अक्सर छैन भन्दा, सिम फ्री छ । केही फोन देखि विदेश समर्थन छैन रेडियो आवृत्ति बैंड जापान प्रयोग, तर हाम्रो समर्थन कर्मचारी मा मोबाइल लागि जाँच गर्न सक्छन् हाम्रो ग्राहकहरु कि आफ्नो फोन मोडेल संग संगत छ बैंड मा जापान । हो, तपाईं एक खरीद गर्न सक्छन् मा एक इलेक्ट्रनिक उपकरण स्टोर जस्तै क्यामेरा, वा अनलाइन मा कहीं अमेजन जस्तै छ । मूल्य भिन्न हुन सक्छन्, तर जस्तै केहि लागि एक नयाँ आईफोन आठ मा वरिपरि ¥, वा त्योभन्दा बढी । निस्सन्देह, दोस्रो-हात फोन आउन सस्ता छ । वास्तवमा, तपाईं भने, हामीलाई थाहा दिनु, मोडेल नम्बर, हामी जाँच गर्न सक्छन् तपाईं को लागि कि यो संग संगत छ. हाम्रो सिम कार्ड वा छैन । प्लस, निकट भविष्यमा, हामी योजना आधिकारिक प्रदान सुरु फोन रूपमा राम्रो तरिकाले. प्रदायकहरू प्रदान सक्छ योजना संग, दस वा तेह्र जीबी डाटा. मोबाइल, र दस जीबी योजना लागि दुवै डाटा सिम र आवाज सिम कार्ड. लागि खल्ती वाईफाई योजना, हामी एक विस्तृत सीमा डाटा को विकल्प देखि पाँच जीबी भन्दा सय जीबी छ । यो पूर्ण व्यक्ति निर्भर.
केही मानिसहरू बस बनाउन वा प्राप्त फोन कल र आवश्यकता छैन धेरै डाटा छ । अरूलाई सधैं प्रयास कुराकानी गर्न डाटा द्वारा जब सम्भव, र जोगिन फोन कल.
तपाईं मात्र प्रयोग गर्न चाहेको सामाजिक मिडिया र जीपीएस, प्रवाह वा डाउनलोड सामग्री मा नियमित वरिपरि, तीन - पाँच प्रति महिना जीबी कवर गर्नुपर्छ. देखि जापान छैन, मुक्त वाइफाइ हटस्पट प्रशस्त मात्रामा मा, प्रयोग गर्ने मान्छे आफ्नो फोन एक धेरै, काम वा मनोरञ्जन सक्छ, अधिक आवश्यक छ । यो पूर्ण व्यक्ति व्यक्ति देखि भिन्न, तर हामी भन्न सक्छौं कि हाम्रो सेवा को लागि पाँच जीबी र सात जीबी योजना छन् सबैभन्दा लोकप्रिय विकल्प छ । यदि आफ्नो योजना समावेश, कल, त्यसपछि हो । तपाईं खरीद भने एक आवाज सिम कार्ड संग, मोबाइल, यो लागत बीस प्रति तीस सेकेन्ड को लागि घरेलू कल. अन्तर्राष्ट्रिय कल, दर देश देश देखि भिन्न. मोबाइल प्रदान एक विशेष छुट कल सेवा भनिन्छ. उपसर्ग नम्बर वा कल प्रयोग गरेर मोबाइल डायल अनुप्रयोग, यो दर छ बस पन्ध्र प्रति तीस सेकेन्ड को लागि दुवै घरेलू कल र अन्तर्राष्ट्रिय कल गर्न धेरै देशहरू. थुप्रै हाम्रो ग्राहकहरु साँच्चै मूल्य यो सेवा । संग मोबाइल, गति पर्वतमाला दुई तीस मा निर्भर गर्दछ, समय र ठाउँ छ । उच्च गति डाटा, तपाईं अझै पनि एक कम जडान गति को माथि गर्न दुई सय. मुख्य वाहक र तपाईं अतिरिक्त तिर्न गर्न टेदर एक उपकरणमा आफ्नो फोन. तथापि, संग, मोबाइल, टेथर गर्ने मुक्त छ । यो बस गन्न को भाग रूपमा आफ्नो सामान्य डाटा उपयोग. यो निर्भर छ भने आफ्नो योजना प्रस्ताव रोमिङ विदेश वा छैन । हुनत हाम्रो सिम कार्ड प्रदान छैन डाटा रोमिङ विदेश, यो अझै पनि सम्भव बनाउन फोन कल.
कृपया मा लागू हाम्रो वेबपेज गर्दा सबै कागजात तयार छन् । यो सरल अनलाइन आवेदन प्रक्रिया मा पूरा गर्न सकिन्छ रूपमा सानो पाँच रूपमा मिनेट, अंग्रेजी, कि तपाईं जापान मा वा छैन । म पहिले देखि नै एक फोन अनुबंध यहाँ र परिवर्तन गर्न चाहँदैनन् मेरो फोन नम्बर । सेवा संग, मोबाइल । हो । मोबाइल सक्षम छन् गर्न स्वीकार मोबाइल नम्बर पोर्टेबिलिटी हो । तपाईं के गर्न सबै छ कल आफ्नो वर्तमान वाहक मार्फत आफ्नो समर्पित हटलाइन.
त्यहाँ अलग संख्या हो लागि प्रत्येक वाहक: (प्रेस आठ लागि अंग्रेजी) (अंग्रेजी देखि सुरु), डोकोमो: (कुरा गर्न एक जापानी फोन अपरेटर, र त्यसपछि सोध्न लागि एक अंग्रेजी बोल्ने अपरेटर).
वैकल्पिक, तपाईं जान सक्नुहुन्छ एक स्टोर गर्न र तिनीहरूले यो दिन तपाईं सही त्यहाँ छ । तपाईं बस गर्न आवश्यक छ देखाउन आफ्नो आईडी तर ल्याउन आफ्नो सिर्फ मामला मा (तपाईं एक छ भने). एक आरक्षण नम्बर, गर्न मा टाउको तपाईं प्रक्रिया मार्फत जाने, हामी छौँ डबल जाँच भने, तपाईं राख्न चाहनुहुन्छ भने आफ्नो पुरानो सेल फोन नम्बर को लागि आफ्नो नयाँ अनुबंध । तपाईं चयन भने"हो, म चाहनुहुन्छ गर्न ल्याउन मेरो जापानी सेल फोन नम्बर मोबाइल", इनपुट आफ्नो आरक्षण नम्बर । त्यसपछि जब हामी सक्रिय आफ्नो नयाँ अनुबंध हालको अंक छ । धेरै ठेके के आयातित एक उमेर सीमा को बीस-एक वा बढी.
मोबाइल ग्राहकहरु लागि, जसले कान्छो हो भन्दा बीस वर्ष पुरानो, हामी अनुरोध अधीनमा को एक आमाबाबुको सहमति फारम, जो, पाठ्यक्रम, अंग्रेजी प्रदान गरिएको छ । जबकि धेरै फोन ठेके आवश्यकता कम्तीमा दुई वर्ष मान्यता बायाँ मा आफ्नो भिसा, हामीलाई संग, तपाईं आवश्यकता छैन । यदि तपाईं हुनेछ जस्तै डाटा सिम कार्ड वा खल्ती वाइफाइ, तपाईं बस गर्न आवश्यक हामीलाई प्रदान आफ्नो पासपोर्ट छ । एक जापानी निवासी कार्ड संग आफ्नो जापानी ठेगाना दर्ता मा यो आवश्यक छ लागि एक आवाज सिम अनुबंध । यदि तपाईं को आवश्यकता एक आवाज सिम कार्ड, तर आफ्नो निवासी कार्ड अझै तयार छैन, तपाईं चयन गर्न सक्छन् आउन हाम्रो कार्यालय मा टोक्यो वा एक हवाई अड्डा काउन्टर (उपलब्ध चाँडै) माथि टिप्न आफ्नो आवाज सिम कार्ड छ । यस प्रक्रिया को पहिचान पुष्टि आवश्यक छ जापानी नियमहरु । तपाईं देखि चयन गर्न सक्छन्, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड वा सुविधा स्टोर नगद भुक्तानी । त्यसैले तपाईं छैन जरूरी छ आवश्यक एक जापानी बैंक खाता.
हाम्रो दीर्घकालीन सेवा, यस्तो आवाज सिम कार्ड योजना, एक न्यूनतम आवश्यकता अनुबंध को अवधि तीन महिना, तर हामी पनि प्रदान अल्पकालीन प्रीपेड योजना, योजना छैन भने जापान रहन को लागि भनेर लामो छ । कुनै, त्यहाँ छैनन्. जबकि प्रमुख प्रदायकहरू अक्सर चार्ज हास्यास्पद रूप से उच्च शुल्क रद्द लागि एक अनुबंध (कहिलेकाहीं सम्म ¥, वा ¥), हाम्रो लागि, यो सिर्फ एक मामला को हाम्रो सम्पर्क इमेल द्वारा ग्राहक समर्थन कुनै पनि समय अघि दिन को अन्तिम महिना को आफ्नो अनुबंध । कुनै, त्यहाँ छैनन्. यसको विपरीत मा, हाम्रो एक ठूलो फाइदा छ कि कुनै पनि लुकेका शुल्क हो, जो अक्सर देख्न अन्य सेवा प्रदायकको छ । कृपया भाषण गर्न हाम्रो ग्राहक समर्थन कर्मचारी छन्, जसले राम्रो प्रशिक्षित गर्न प्रतिक्रिया पेशेवर इमेल जांच, अनलाइन च्याट र फोन कलहरू अंग्रेजी मा. अहिले, हामी छौं चलिरहेको एक विशेष वसन्त अभियान कहाँ नयाँ ग्राहकहरु बचाउन सक्छ ¥, जब तिनीहरूले सेट अप आफ्नो अनुबंध संग एक सस्ता"सक्रियता शुल्क छ ।"लागि अधिक विवरण को अभियान, बाहिर जाँच हाम्रो वेब पृष्ठ वा ड्रप, हामीलाई एक सन्देश (तल हेर्नुहोस्).
आवेदन प्रक्रिया लागि जापानी पेन्सन लाभ-जापान पेन्सन सेवा
Mẫu khiếu Nại - ví Dụ vụ Kiện trong trường Hợp sai lầm
© 2022 सबै वकिल जापान मा अनलाइन. सबै भन्दा ठूलो कानूनी पोर्टल को वकिल.